Gonzo's Treasure Hunt Live oghere Nyocha - latabernasanlucar.com
NetEnt weputara ihe Gonzo choro na 10 afo gara aga ma o bu ndi ama aman’etiti ndi gbara egwun’aho ndia.
Crimson Tiger kpebiri ịkụ un websiten’ịhapụ Gonzo’s Quest Megaways na 2020 nke bụ ụdị Megaways siri ike nke mbụ Gonzo’s Quest.
Na Machị 23, 2021, Evolution Gambling wepụtara vidiyo teaser nke isi ọhụụ site na njem akụkọ ọdịnala Gonzo; Zochụ nta akụ Gonzo Live.
Ya only, gịnị bụ Gonzo’s Treasure Hunt Liven’agbanyeghị? )
Zochụ nta akụ akụ Gonzo bụ ụdị cha cha cha cha nke Gonzo’s Quest. Na Gonzo’s Quest Treasure Hunt dị ndụ, ị na-egwu oghere na onye na-ebi ndụ na Evolution Gambling’s lobby. Zochụ nta akụ Gonzo na-eme ka ihe ọ bụla dị ka ihe ezi uche dị na ya karịa ka ọ dịtụbeghị mgbe ọ bụla n’ihi ekele nke eziokwu.
Na nyocha a, anyị ga-eleba anyan’ihe Gonzo Treasure Hunt nwere maka gị, ka ị nwee ike ịmata ihe ị ga-atụ anyan’aka zochụ nta akụ Gonzo.
Na-eche ihe ụfọdụ ezigbo casinos ebe ị nwere ike igwu Gonzo’s Treasure Hunt Stay? Mgbe ahụ ị bịara ebe kwesịrị ekwesị!
Anyị maara otú na-agwụ ike ma na-ewe oge ọ nwere ike ịbụ na ị gafere ọtụtụ casinos naanị na-emechu ihu website Id ọrụ ha.
Ọ bụ ya mere anyị ji chọta ụlọ ọrụ ntanetị nwere ezigbo ndị ahịa ebe ị nwere ike igwu Gonzo’s Treasure Hunt ka ị ghara inwe.
Ndị casinos that a nyere ikikere website Id Malta Gambling Authority ma nwee ezigbo nnabata nnabata.
100 Free Spins t Starbust website t deposit 10 nkwụnye self
Kedu ka zochụ nta akụ Gonzo si arụ ọrụ?
A na-emepụta Gonzo’s Treasure Hunt website wont mmekorita nke NetEnt na Evolution ma bụrụ ụdị cha cha chara acha nke oghere nke Gonzo’s Quest. Dị nnọọ ka oghere, egwuregwu na-setịpụrụ t a omimi Incan temple.
A pụrụ iji Gonzo’s Treasure Hunt gameplay tụnyere egwuregwu efu enwere ike ịdị na PC ochie website Id 90 t mmalite nke 2000, Minesweeper.
You banye n’ebe egwuregwu ahụ batara, ị ga-ahụ nnukwu mgbidi dị n’etiti ihuenyo gị. Mgbidi ahụ nwere nnukwu 10 x 7 grid. Enwere nkume zoro ezo na mgbidi ahụ yana ntụgharị ọ bụla na-ekpughe ụfọdụ okwute ị ga-ahọrọ.
Enwere nkume 6 ị nwere ike ịhọrọ. Okwute ọ bụla na-akara akara ọtụtụ.
Akara nkume ndị that a dị ka ndị that a:
Mgbe ị na-ahọrọ nkume gị ị ga-eme ka”họpụta gị”. Nke a na-agụnye ịtụtụcha ntụ na mgbidi ebe okwute gị ga-egosi. Nwere ike ime ihe ọ bụla website Id 1 họrọ 20 họpụta. Ihe ndị ọzọ ị na – ahọrọ ka ị na – eme ka ohere gị dị elu ga – emeri ma ọ dịkarịa ala 1 nke nhọrọ gị.
Ntọala mbụ gị na nkume na-amụba website t ọnụọgụ nhọrọ. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ị zitere $ 1 t 8x t $10 t nkume 65x.
Pick kpebiri ịme 15 maka nkume 8x t 5 họpụtara maka nkume 65x. Ngụkọta gị ga-abụ:
$ 1 x 15 + $ 10 x 5 ma ọ bụ $ 15 maka nchịkọta 15 maka nkume 8x na $ 50 maka nchịkọta 5 maka nkume 65x maka ngụkọta nke $ 65.
Nwere ike nzọ ebe ọ bụla website wont $ 0.10 t $100 kwa nkume.
I nwekwara ike iji ọrụ nnweta akpaaka nke na-ebu gị ọka dabere na mpaghara ịtọ.
Nrite Ntanye na Gonzo’s Treasure Hunt
Nwere ike ịhụ ọnyà ụfọdụ na-atụghị anya ya na Gonzo’s Treasure Hunt maka ụfọdụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ dị elu maka atụmatụ Nrite Nrite.
Na ntụgharị ọ bụla, Gonzo tụgharịrị igodo nke na-ebute atụmatụ a t ụfọdụ ntụpọ na grid na-enweta nkume na mgbakwunye ọtụtụ.
Ọ bụrụ na gị eburu ala t ala t mpaghara ga-atụkwasịkwara t ala nke gị nkume na ị ga-enweta a payout !
Uru nke ndị na – amụba ụba na nturu ugo nwere ike ịdị website t 3x ruo 100x. Oge ụfọdụ ị nwere ike ị nweta ndị ọzọ Nrite tụbara n’otu okirikiri ahụ maka atụmatụ “re-dobe”. Enwere ike karịa 10 redrops n’otu okirikiri.
Gonzo’s Treasure Hunt RTP na nkwụnye ụgwọ
Gonzo’s Treasure search’s’s RTP dịgasị ichen’etiti nkume ị họọrọ ịkụ nzọ. Anyị kwuru banyere RTP nke nkume ọ bụla n’okpuru:
1x 96.42% 2x 96.51% 4x 96.35% 8x 96.56percent 20x 96.55percent 65x 96.52%
Onu ugwo kachasị nke ị nwere ike ịtụ anya website t otu nkume bụ 20,000x!
Gonzo’s Treasure Hunt Live Review Mmechi
Gonzo’s Treasure Hunt Live bụ ihe mara mma ma na-enye ume ọhụrụ na oghere Gonzo’s Quest. Ndị na-enye ya na-atọ ọchị ma na-emekọrịta ihe. Gonzo gosipụtara na 3Dn’ihi atụmatụ eziokwu dịwanye elu nke Evolution Gambling ji.
Egwuregwu ahụ bụ nke abụọ na nke ọ bụla na ike ịnweta nke 20,000x dị nnọọ ike ileghara anya.
Obi dị anyị ezigbo ụtọ na njirimara ọdịda na-ahụ maka ahụmịhe zuru oke anyị na-egwu Gonzo’s Treasure Hunt ma na-akwado gị ka ị kpọọ egwuregwu egwuregwu egwuregwu a!